MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardFAQs MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
၁။ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် ခဲခြစ်လိုက်တာ ဂဏန်းတွေပျက်သွားပြီးဖြည့်မရတော့လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ငွေဖြည့်ကတ်တွင် QR Code ပါရှိပါက အဆိုပါ QR Code ကို MPT 4U App တွင် Scan ဖတ်ပြီး ဖြည့်သွင်းကြည့်ပေးပါ ခင်ဗျာ။
အဆင်မပြေပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ တင်ပြပေးနိုင်ရန်အတွက် ဆင်းကတ်ကိုမှတ်ပုံတင်ထားသောအမည်
၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ၊ ငွေဖြည့်သွင်းမည့် ဖုန်းနံပါတ်အား စာရွက်ပေါ်သို့ချရေးပြီး
ငွေဖြည့်ကတ်နှင့် တကွ ပူးတွဲ၍ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး Tu Tu Chat ၏” Agent နှင့် ဆက်သွယ်ရန်” မှတဆင့်ပေးပို့ပေးပါ ခင်ဗျာ။
၂။ ဆင်းမ်ကဒ်ပျောက်သွားပါက ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ?
MPT အရောင်းဆိုင်များသို့ မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ စာချုပ် (ရှိပါက)ယူသွားရန်လိုအပ်ပြီး၊
လတ်တလောခေါ်ဆိုခဲ့သော ဖုန်းနံပါတ် ၃ ခုအား ပြောပြရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
၃။ မိမိဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်များ ဘေလ်လက်ကျန်များကို စစ်ဆေးလိုပါက MPT4U ဗားရှင်းအသစ်တွင် ဘယ်လို စစ်ဆေးနိုင်မလဲ။
၄။ Postpaid(GSM, ADSL, PSTN) ဖုန်းနှင့် FTTH ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် မည်သို့ငွေပေးဆောင်နိုင်သနည်း။
၁။ MPT TRA Counter များ၊ CB Bank, KBZ Bank, AYA Bank Counter များ၊ MEB နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် Shopping Mall/ Center များတွင် ငွေပေ:သွင်းနိုင်ပါသည်။ KBZ, CB, and AYA Mobile Banking များနှင့်လည်း ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက – https://www.mpt.com.mm/mm/payment-through-bank-channel-mm/
၂။ လစဥ်ငွေတောင်းခံလွှာများကို ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် (သို့) ဖုန်းလက်ကျန်ငွေမှ တစ်ဆင့်လည်း ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ပေးဆောင်နည်းကို ကြည့်ရန် – https://www.mpt.com.mm/mm/home-mm/support-mm/topup-payment-for-postpaid-service-mm/
၅။ MPT4U မှ E-invoice ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာလဲ?
‘-သုံးစွဲသူများသည် နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသည့် ၆လစာ ငွေတောင်းခံလွှာ နှင့် ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ဒီဂျစ်တယ်နည်းလမ်းဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း
-ယခင် စာရွက်ငွေတောင်းခံလွှာ များထက် ပိုမိုစောလျင်စွာ နှင့် အချိန်မှန် လက်ခံရရှိနိုင်ခြင်း
-MPT4U ရဲ့ ပင်မစာမျက်နှာ(သို့) ဝန်ဆောင်မှုစာမျက်နှာ(သို့) side menu ရှိ “ အခြားဘေလ်များ” မှတစ်ဆင့် လစဉ်ကြေးငွေတောင်းခံလွှာ ထွက်ရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအား စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။
၆။ MPT4U တွင် E-invoice စာရင်းသွင်းဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ?
လစဉ်ငွေတောင်းခံလွှာ လက်ခံရရှိသော Postpaid service (PSTN, ADSL, GSM, CDMA, IPStar)နှင့် FTTH သုံးစွဲသူများအားလုံးသည် MPT ၏ GSM ဖုန်း တစ်လုံး ရှိရုံဖြင့် MPT4U application တွင် E-invoice အား စာရင်းပေးသွင်း ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ စာရင်းသွင်းရန် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရပါမည်။
၇။ MPT Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူလိုပါက ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ?
နေ့စဉ်ပေးစနစ်ရယူရန် 7979 သို့ “ REG D” ဟု SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။လစဉ်ပေးစနစ်ရယူရန် 7979 သို့ “ REG M” ဟုSMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
၈။ ဘယ်ဖုန်းလိုင်းကိုမဆို ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ ဖုန်းပြော Package (သို့) ကြိုက်ရာခေါ် packကို ဝယ်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်လို ဝယ်ရမလဲ?
ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ်ကို *997# ကို ခေါ်ဆိုပြီး ဖြစ်စေ၊ MPT4U app မှဖြစ်စေ အလွယ်တကူ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက – https://www.mpt.com.mm/en/home/promotion/kyite-yar-khaw-en/
၉။ ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?
၇ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ်၊ ၁၅ရက်သုံး
ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် နှင့် ၃၀ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ဆိုပြီး ပက်ကေ့ချ် (၃)မျိုး ရှိပါသည်။ပက်ကေ့ချ်များ ၏ Voice minutes သယ်ယူနိုင်သောကာလမှာ ပက်ကေ့ချ် ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက် အတွင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ MPT Club အစီအစဉ်မှာ ဘယ်လိုပါဝင်ရမှာပါလဲ။
(၁)USSD ကို အသုံးပြုခြင်းနည်းလမ်း – *345# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်း။
(၂)SMS ကို အသုံးပြုခြင်းနည်းလမ်း – 345သို့ REG M/F ဟု စာတို(SMS)ပေးပို့ခြင်း။
(၃)MPT4U app link
(၄)Andriod : https://bit.ly/2z4ZhrJ
၁၁။ ဒေတာအသုံးပြုမှုများကို Main Balance, Loan Balance တို့မှ သုံးသလောက်ပေးနှုန်းထားနဲ့ မဖြတ်စေချင်ပဲ ဝယ်ယူထားသော data package များမှကျသင့်စေချင်ပါသည်။ ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ဒေတာပက်ကေ့ချ်များအသုံးပြုပြီးချိန်တွင်ပက်ကေ့ချ်ထပ်ဝယ်နေရန်မလိုဘဲအလိုအလျောက်ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းနှုန်းထားနဲ့ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်သော Data Carry Plus Auto Renewal ကို MPT မှမိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။ ဝယ်ယူထားသောပက်ကေ့ချ်၏ဒေတာပမာဏ 50MB အောက်လျော့နည်းသောအချိန်(သို့)ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ည၁၂နာရီတွင်အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးပေးသွားမည်။ ပုံမှန် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်ကဲ့သို့ 1000GB အထိ lucky data များကံထူးနိုင်ပြီး သက်တမ်းအတွင်း(သို့)သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး(၇)ရက်အတွင်း Package ထပ်မံဝယ်ယူပါကမသုံးစွဲဘဲကျန်ရှိနေသောလက်ကျန် Data များ(Bonus Data မပါဝင်)ကိုအသစ်ဝယ်ယူသော Package နှင့်ပေါင်းပြီး သက်တမ်းတိုးအသုံးပြုနိုင်မည်။ ဤအစီအစဉ်ကို ၉၇၉ ကျပ်နှင့် ၁၂၇၉ ကျပ် Data Carry Plus Packages များသာရယူနိုင်ပါသည်။ ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကားအစီအစဉ်ရယူထားသော Prepaid GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများရယူနိုင်မည်။ CDMA ၊ Base Tariffအသုံးပြုသူများနှင့်လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများ မပါဝင်နိုင်ပါ။။ 979Ks – 515MB ကိုဝယ်ယူရန် *777*3*3# နှင့် 1279Ks – 675MB ကိုဝယ်ယူရန် *777*4*3# ။ ထိပေါက်ခံစားခွင့်မရရှိနိုင်ပါ။
၁၂။ သက်ဆိုင်ရာထောဘီ ဖုန်းဘေလ်များ လဲလိုက်ပါတယ်။ဖုန်းဘေလ်တွေပဲတိုးလာမယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်လဲလိုက်ချိန်မှာတော့ ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ် (Main Balance) ထဲက ပိုက်ဆံတွေဖြတ်သွားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
မည့်သည့်ပြည်တွင်းမိုလ်ဘိုင်းဖုန်းမဆိုခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း၊ ဒေတာ သုံးစွဲခြင်းတို့အတွက်လဲလှယ်ထားသော ထောဘီ ဖုန်းဘေလ်မှ ဦးစွာကောက်ခံပါမည်။ ပက်ကေ့ချ်များဝယ်ယူခြင်း၊ VAS ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းများ ပြုလုပ်ပါက ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်ငွေမှ ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူရယူထားသောအစီအစဉ်၏နှုန်းထားများ [ဆွေသဟာ(သို့) ရှယ်ပြော(သို့)ရွှေစကား]အတိုင်း ကျသင့်စေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအပြင် လဲလှယ်ထားသော ထောဘီဖုန်းဘေလ်ကုန်သွားချိန်မှာလည်း ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်ငွေမှ ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူရယူထားသောအစီအစဉ်၏နှုန်းထားများ [ဆွေသဟာ(သို့) ရှယ်ပြော(သို့)ရွှေစကား]အတိုင်း (သို့) ဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်ရှိပါက ပက်ကေ့ချ်မှ ကောက်ခံကျသင့်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၃။ ဘေလ်တွေအရမ်းကုန်နေပါတယ်၊ အသေးစိတ်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲ။ ဒေတာအသုံးပြုမှုကန့်သတ်ထားလို့ကောရလား။
*224# ကိုဖုန်းခေါ်ဆို၍ လည်းကောင်း၊ MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း မှတဆင့်လည်းအသုံးပြုမှု ပမာဏ အသေးစိတ်ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။မိမိသတိမထားမိလိုက်ပဲ ဒေတာပိုမို အသုံးပြုမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် Setting ထဲမှာ Data Limit ကို မိမိ အသုံးပြုလိုသည့် ပမာဏအတိုင်း ကန့်သတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
၁၄။ ပိုက်ဆံဖြည့်ထားတာမကြာသေးပဲနဲ့ Balance မှာ "0" ပြနေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
လူကြီးမင်း သည် “ယူထား+” ဝန်ဆောင်မှုမှ ချေးငွေရယူ၍ အသုံးပြုထားသည့် အတွက် ဖုန်းဘေလ် ပြန်ဖြည့်သွင်းတိုင်း လူကြီးမင်း ရယူထားသော ငွေပမာဏထဲမှ ဖြတ်သောကြောင့် Balance မှာ0ပြနေတာပါ။
မှတ်ချက်။ လူကြီးမင်း ၏ဖုန်းလက်ကျန်ငွေပေါ် မူတည်၍ ချေးငွေပမာဏနှင့်ဝန်ဆောင်ခကို နောက်တစ်ကြိမ်ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် အပြည့်အဝ(သို့)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကောက်ခံပါမည်။
ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှ ကြွေးကျန် ငွေကို *800*7# သို့ခေါ်ဆိုစစ်ဆေးနိူင်ပါသည်။ ( သို့ ) 8000 သို့ Debt ဟုပေးပို့၍ လည်းစစ်ဆေးနိူင်ပါသည်။ မိမိချေးငွေစာရင်းကို စစ်ဆေးလိုပါက *800*5# သို့ခေါ်ဆိုစစ်ဆေးနိူင်ပါသည်။
၁၅။ ချေးငွေ (၈၀၀) ကျပ် ချေးယူ၍မရပါ၊ စစ်ဆေးပေးနိုင်မလား?
MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုသည့်ရက်သည် ရက်(၃၀)နှင့်အထက် ရှိရမည်။
ရက်(၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ် အနည်းဆုံး(၃၀၀၀)ကျပ်ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။